China Brass Parts orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | firaka
Raha manana ianao faritra varahina mila milina, isika dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana mahomby indrindra ary afaka mamita tsara ny asa.
Inona avy ireo filàna varahina?
Ny varahina dia vita amin'ny alimo varahina sy zinc, vita amin'ny varahina, ny zinc dia antsoina hoe varahina mahazatra, raha misy singa maromaro kokoa amin'ny alloys fantatra amin'ny anarana hoe varahina manokana.
Fampiharana inona no ampiasaina matetika amin'ny varahina?
Ny varahina dia manana fampiasa betsaka, azo atao tanky rano, ho an'ny fantson-drano, medaly, boribory, fantsom-bibilava, condenser, akorandriaka ary karazana vokatra mena be pitsiny.
Ny ampahany amin'ny milina varahina dia manana tombony lehibe maromaro raha oharina amin'ny fitaovana hafa. Ny ampahany sy ny singa vita amin'ny varahina dia mateza, lafo vidy ary mamorona tombo-kase henjana kokoa ho an'ny fittings. Ho fanampin'izany, ny milina varahina sy ny faritra mihodina dia manana hafanana avo sy fanoherana harafo! Ny tena zava-dehibe dia mora ampiasaina sy ampidirina ny ampahany amin'ny masinina vita amin'ny varahina Cox Manufacturing ary natao mifanaraka amin'ny fenitra sy fenitra misy anao!
Fampiharana momba ny milina varahina
Ny masinina varahina dia ampiasaina amin'ny fampiharana sy indostrialy marobe, ao anatin'izany ny ara-pahasalamana, herinaratra, fantson-drano, ary na ny entan'ny mpanjifa aza. Tian'ireo orinasa ireo faritra sy singa vita amin'ny varahina kely satria izy io no iray amin'ireo fitaovana mora indrindra amin'ny milina, lafo ny vidiny ary maharitra matevina izy io. Ny fittings vita amin'ny varahina dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika satria ambany ny tanjaka sy ny lanjany. Fampiharana masinina vita amin'ny varahina fanampiny dia misy ny injeniera, ny fantsom-pandrefesana ary ny asan'ny etona satria ny fittings vita amin'ny masinina dia manana coefficient ambany amin'ny friksi sy toetra tsy mahazaka harafesina. Cox Manufacturing dia mahatakatra ny indostria rehetra sy ny mombamomba azy ary ny fenitra momba ny fampiharana, ka izany no antony namokarana voalohany ny varahina.
Ireo faritra vita amin'ny varahina mahazatra
● Fittings Pipe
● Fitaovana manidina
● Fittings famatrarana
● Fittings Bulkhead
● Fitaovana fihodinana
● Fitaovana grunner
● Giratra kankana
● Fitaovana mozika
● Orifice famatrarana
● Ary faritra maro hafa vita amin'ny varahina
Wuxi Lead Precision milina manamboatra faritra vita amin'ny varahina amin'ny alàlan'ny fizotrany maro samihafa: milina, fikosoham-bary, fihodinana, fandavahana, fanapahana laser, EDM, nohitsakitsahiko, vy metaly, fanariana, fanaovana hosoka sns.
Teo aloha: Mihodina ny CNC
Manaraka: Pieram-by Staniless